अाज सोमबार, शिव महादेवलार्इ खुशी पार्न के के गर्नुपर्छ? जान्नुहाेस – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > अाज सोमबार, शिव महादेवलार्इ खुशी पार्न के के गर्नुपर्छ? जान्नुहाेस
एजेन्सी । सोमबार ‘शिवजी‘को दिन हो। यस दिनमा शिवजीको पुजा-आरधना गरे शिवजी चाँडै नै खुसी हुन्छन्। यस दिनमा शिव मन्दिर गई विशेषतः ‘अर्धनारीश्वर पुजा’ गर्ने अनि ‘ऊँ नमः शिवाय’ मन्त्र जप्नुपर्दछ। अझै सोमबारको दिन शिवजीको पुजा गर्नेबेला शिवपुराण पढ्दा शिवजी प्रसन्न भई मागेको वर दिने विश्वास गरिन्छ। कुमारी स्त्रीले राम्रो वर पाउनका लागि शिवजीको पुजा गर्ने गर्दछन् भने विवाहित स्त्रीले आफ्नो परिवारमा सुखशान्ती मिल्नेछ ।
त्यस्तै पतिको लामो आयुको लागि शिवजीको पुजा गर्दछन्। यस दिन व्रत बस्दा एक-छाक मात्रा खानुपर्दछ भने खानामा नुन-तेल मिसाउन मनाही छ। एजेन्सी । हिन्दु धर्म र धर्मावलम्बीहरूका अनुसार, जुन ठाउँमा रिती पुर्याएर शिवजीको पुजा गरिँदैन अनि जुन ठाउँमा नियमित शिवजीको पुजा गरिँदैन, त्यो ठाउँमा शिवलिङ्ग राख्नुहुँदैन। किनकी, जहाँ शिवजीको अपमान हुन्छ, त्यहाँ ठूलो कष्ट आइपर्छ। भोलेनाथ एकदमै शान्त स्वभावका देवता हुन् र उनलाई सजिलैसँग खुसी बनाउन सकिन्छ। तर, उनको क्रोधलाई कसैले पनि सामना गर्न सक्दैनन्।
गोलाईँती फूल (केताकी फूल): एकदिन, विष्णु भगवान र ब्रह्मादेवको बीचमा ‘को बलियो’ भन्ने विषयमा घमासान युद्ध भइरहेको थियो। अनि जब उनीहरूले एकदमै खतरनाक अस्त्र प्रयोग गर्न लागे, तब उनीहरूको बीचमा ज्योतिर्लिङ्ग बनेर शिवजी प्रस्थान गर्नुभयो। त्यसपछि शिवजीले विष्णु र ब्रह्मालाई ज्योतिर्लिङ्गको फेद र टुप्पो पत्ता लगाउन आदेश दिनुभयो।
तुलसी: शिवपुराणमा उल्लेख गरिएअनुसार, दैत्य जालन्धरको वध गर्न एकदमै कठीन थियो, किनभने उनकी पत्नीको पतिव्रत शक्तिले उनलाई कुनै पनि देवताले हराउन नसक्ने शक्ति दिएको थियो। तर विष्णु भगवान एकदमै चलाख१ जालन्धर र महादेवको युद्ध भैरहेको बेला विष्णु भगवानले जान्धरको रूप धारण गरी उनकी पत्नी ‘तुलसी’को पतिव्रत शक्ति लुट्न गए। जालन्धररूपी विष्णुले तुलसीको पतिव्रतलाई लुट्नेबित्तीकै महादेवले जालन्धरलाई भष्म बनाइदिएका थिए।
नरिवलको पानी: शिवजीलाई चढाउन नहुने पवित्र वस्तुहरूमध्ये नरीवलको पानी पनि एक हो। शिवजीलाई सिङ्गो नरीवल चढाउनु कुनै भूल हुँदैन, तर शिवलिङगमा कहिल्यै पनि नरीवल फुटाएर पानी नचढाउनुहोला। शिवपुराणमा, यस्तो गरेमा शिवजी रिसाउने र अनिष्ट हुने जनाएको छ।
बेसार: बेसारलाई स्त्रीहरूको सुन्दरता बढाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यही कारणले गर्दा नै शिवजीलाई बेसार चढाउन नहुने शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।
सिन्दूर: विवाहित महिलाहरूको लागि सिन्दूर एकदमै महत्वपूर्ण र पवित्र मानिने गरिन्छ। आफ्नो पतिको लामो आयुको लागि हिन्दु महिलाहरूले सिउँदोमा सिन्दूर लगाउने गर्दछन्। तर, शवजी त्रीमूर्तीदेवहरू मध्ये संहारकर्ता हुन्। त्यसैले नै शिवजीलाई सिन्दूर प्रयोग गरेर पुजा गर्नु ठूलो भूल हुन जान्छ। यस्तो शिवपुराणमा उल्लेख गरिएको छ।